Junior Accountant | Job in Myanmar ﻿
22.7.2019, Full time , Trading
Company: Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading )
•	Office နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တွဲခြင်း၊သိမ်းဆည်းရမည်။
•	Cash Sale,Credit Sale, Mobile Sale -Daily,Weekly,Monthly စာရင်းများပြုစုရမည်။
•	Stock စာရင်းများ ပြုစုရမည်။
•	B.Com ,B.A(Eco),LCCI II , III အောင်ရမည်၊
•	ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ရမည်၊၊ အသက်(၃၅)နှစ်အောက် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်၊၊
•	Salary is 200,000
Work location No.(F/111), Thudamma Road ,North Oakkalapa Township,Yangon, Myanmar
Job posted: 22/7/2019
Mechanic (For Construction)
11 Days, Full time , Trading
•	ကားကွီးပိုငျးအတှအေ့ကွုံမြားပွီး ကြှမျးကငျြတတျကြှမျးသူဖွဈရမညျ။ •	အနညျးဆုံးလုပျသကျ 3နှဈအထကျရှိသူဖွဈရမညျ။ •	အသကျ 25နှဈအထကျနှငျ့ 50နှဈအောကျရှိသူဖွဈရမညျ။
•	Good Communication and Problem Solving Skills •	Proficiency in Computer Literacy •	Can use E-Mail and Internet
•	Age between (25) and (35) years. •	Good communication , Interpersonal skill and problem solving skills •	Can work under pressure
46 Days, Full time , Trading
•	Experience in Customer Service •	Computer Knowledge ရှိသူဖြစ်ရမည်။
66 Days, Full time , Trading
•	လူမှုဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျ၍ အ ပွော အဆို သှကျလကျခကျြခြာသူ ဖွဈရမညျ။ •	လုပျငနျး အ တှေ့အကွုံရှိသူ ဦးစားပေးမညျ ။ (လုပျငနျး အ တှေ့အကွုံ မရှိသူမြားလညျး လြှောကျထားနိုငျသညျ။) •	Computer Knowledge ရှိသူ ကို ဦးစားပေးမညျ� ...
Job ads in Oil/Gas Engineering Jobs
Job ads in Oil/Gas Engineering Jobs and in Mandalay Region
•	Position is responsible for all day-to-day purchasing administrative aspects of maintaining the purchasing systems. •	Flexibility andapositive attitude are required. •	Creation and processing of work orders and invoices •	General administrative duties. •	Filing, Answering phone and directing incoming calls. •	Vendor interaction. •	Analyze price and get the best deals possible. •	To find cost-effective deals and supplier for all requirements for projects and sites. •	Discover the best ways to cut procurement expense ...
•	Computer Microsoft office (Internet, Email) ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်င်္ပြီး အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
79 Days, Full time , Trading
•	သာစည် ၊ မိထ္တီလာ ၊ နေပြည်တော် ဆီဆိုင်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Collecting and reviewing financial information. •	Predicting future financial trends. •	Reporting to management and providing advice how the company and future business decisions might be impacted. •	Producing financial reports related to budgets, account payables, account receivables, expenses. •	Developing long-term business plans based on these reports. •	Reviewing, monitoring and managing budgets. •	Developing strategies that work to minimize financial risk . •	Analyzing market trends and competitors. •	Planning ...
Internal Audit Incharge
•	Responsible for ensuring internal audit requirements are fulfilled in accordance with Internal Audit Department Charter, Internal Audit Procedures and external legislation/ regulatory policies. Plan and participate in the preparation phase of audit assignments and audit programs, including assignment scope and resources. Perform audit fieldwork. Participate in the reporting and communication process of audit assignments. Analyze reasons for deviations from the Annual Audit Plan. •	Support and direct junior internala...
•	ပေးအပ်သောတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်နေရာ •	အမှတ်(1/713၊ 2/713)၊၂၁ ရပ် ကွက်၊ တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုံ (၂) အနီး၊ ဒဂုံ မြို့သစ် တောင်ပိုင်း။
Job ads in Oil/Gas Engineering Jobs and in Yangon (Rangoon)
•	လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတရှိသူ (လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေး ၊ မီးဘေး လုံခြုံရေး စသည်) •	တောင်ဒဂုံတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်နေရာ အမှတ်(၁/၇၁၃၊ ၂/၇၁၃ ) ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ၊ (၂၁) ရ ...
•	လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတရှိသူ (လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေး ၊ မီးဘေး လုံခြုံရေး စသည်) •	လှိုင်သာယာ တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်နေရာ အမှတ်(၁၉၄၇/က )၊ ရန်ကုန်- ပုသိမ် လမ်းမကြီး ၊ ဘုရင်� ...
135 Days, Full time , Trading
•	Computer Microsoft Office (Word,Excel,Email, Internet) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ •	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
•	Computer Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Internet, Email) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ •	ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု့ ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
144 Days, Full time , Trading
•	Management of the entire recruiting staff: sourcing resumes/candidates, conducting phone and in person interviews, scheduling, tracking and reporting on candidate and interview data. •	Negotiates salary and administrative components involved in full staff recruiting. •	Expert in utilizing social media sources, resume databases , and job boards to source and pursue qualified candidates. •	Ensure necessary documentation related to allowances, appointments and contracts are completed for all recruitment. •	Supervise to maintain and ...
•Evaluating risk exposure relating to achievement of the organization’s strategic objectives • Evaluating the reliability and integrity of the information and the means used to identify, measure, classify and report such information • Evaluate adequacy of Financial, Operational, and compliance controls • Assess reliability of internal (e.g. management) and external (e.g. financial and regulatory) reports • Evaluating the efficiency and effectiveness of operations • Special investigations at the request of the board or man ...
•	လိုင်စင်အနီ ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ပြီး ( အုတ်-သဲ- ကျောက် သယ်) ကား မောင်းနိုင်သူ ဖြစ်ရမည် •	လမ်းကြောင်းနှင့် အချိန်ဇယားအတိုင်း တိကျ စွာ လိုက်နာမောင်းနှင်ရမည်။ •	ကား စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းမျ� ...
•	Maintain to work structure by updating job requirements and job decription for all Posting •	Maintains organization staff by establishingarecruiting teating and interviewing program. •	Update and checking employee daily attendance,leave,late and absent. •	Coordinate with HR manager to Introduce new empoloyee to the organization. •	Development implement HR policies for the company. •	Sourcing condidate for vacancies (External/internal) •	Arrange for all meeting and prepare for meeting minutes. Office Executive ( Wai Zaya ...
Sale & Marking Trainee
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည် •	ဈေးကွက်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပြီး Sale ပိုင်းကို Management လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် •	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ၀တ်ဆင်တတ်သူ အပြောအဆို ပြေပြစ်ပြီး သည်းခံနို ...
•	To promote products and services to customers and negotiate contracts with the aim of maximizing sales profits •	Able to work under pressure and must have teamwork ability •	Other duties as assigned by Marketing Manager or MD
•	Maintains administrative staff by recuiting ,seleting ,orienting,and training employees;maintainingasafe and secure work environment ;developing personal growth opportunities. •	Providies communications systems ,by identifying needs; evaluating options;maintaining equipment;approving invoices. •	Conpletes special projects by organizing and coordinating information and requirements;planning arranging and monitoring results. *Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. •	Monitoring costs and expenses to ...
•	Office နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများဖိုင်တွဲခြင်း၊သိမ်းဆည်းရမည်။ •	Cash Sale,Credit Sale, Mobile Sale -Daily,Weekly,Monthly စာရင်းများပြုစုရမည်။ •	Stock စာရင်းများ ပြုစုရမည်။ •	အခါအားလျော်စွာမန်နေဂျာမှပေးအပ်သည့်တာဝန်အားထမ်းဆောင် ...
149 Days, Full time , Trading
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Internal Audit Incharge	(ရုံးချုပ်)
155 Days, Full time , Trading
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	လိုအပ်လျှင်နယ် သွားနိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ IT Trainee / Supervisor
•	တာဝန်ကျသည့် မည်သည့်နေရာမဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Supervisor /Shit Leader
•	တာဝန်ကျသည့် မည်သည့်ဆီဆိုင်မဆိ နေ့/ည အလိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Manager /Assistant Manager (For Petrol Station)
177 Days, Full time , Trading
•	Making Entry Daily Lager •	Cash Controlling •	Handle Monthly Trial Balance •	Handle Monthly Financial Statement •	Prepare Daily,Weekly,Monthly Report •	Manage Fixed Assets Register •	Handle Full Set of Account Including Accual And Prepaid •	Control Inventory Lager •	Making Import Sale & Export Sale Account •	Handle Trial Balance
•	ယာဉ်မထွက်ခွာမီ ဆီ၊ရေ၊လေ၊၀ိုင် စစ်ဆေးရမည်။ •	ယာဉ်သန့်ရှင်းရေးအား နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရန် •	ယာဉ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပြရမည် •	လိုင်စင်(ညို/နီ)ဖြစ်ရမည် •	အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၃)န� ...
M & E Trainee
•	ဆိုဒ် များရေ & မီး ပြုပြင်ခြင်း •	ဆီဆိုင်များနှင့်ဆက်စပ်မီးပြုပြင်ခြင်း •	IT များနှင့်ဆက်စပ်မီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း •	Air Con ပြုပြင်ခြင်း •	မီးစက်/ ဓါတ်လှေကားပြုပြင်ခြင်း
•	Undertake daily administrative tasks to ensure the functionality and coordination of the department’s activities •	Support marketing executives in organizing various projects •	Conduct market research and analyze consumer rating reports/ questionnaires •	Employ marketing analytics techniques to gather important data (social media, web analytics, rankings etc.) •	အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်း (တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေး)
•	ရောင်းရငွေအား Cashier ထံ ချက်ချင်းအပ်နှံရမည်။ •	ငွေရဘောင်ချာအား Customer ထံပေးရမည်။ •	ရောင်းချသည့် Productအ ကြောင်းသေသေချာချာရှင်းပြနိုင်ရမည်။ •	ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ •	ဆိုင်နှင ...
•	Undertake daily administrative tasks to ensure the functionality and coordination of the department’s activities •	Support marketing executives in organizing various projects •	Conduct market research and analyze consumer rating reports/ questionnaires •	Employ marketing analytics techniques to gather important data (social media, web analytics, rankings etc.)
•	ဖိုင်တွဲခြင်း၊စာဝင်/စာထွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း •	လိုအပ်သည့်စာများရိုက်ပေးခြင်းEmailစစ်ခြင်း၊ပို့ခြင်း •	ဖုန်းအ၀င်အထွက်ဖြေကြားပေးခြင်း၊အခြားဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ပေးခြင်း •	မိတူဆွဲခြင်း၊office နှင့်ပတ်� ...
•	Manage staff and assign duties. •	Plan, direct and evaluate the operations of the petrol station. •	Study market research and trends to determine consumer demand, potential sales volumes and effect of competitors operations on retail & mobile sales. •	Inquiring the prices of competitor & take approval the price from enterprise head. •	Manage and inspect the Daily Sale. •	Determine stock needs, interact positively with customers, monitor receiving goods, maintain inventory and minimize waste and pilferage. •	Respons ...
•	Daily operation, expenditure and Income dataများစိစစ်၍ တင်ပြရမည် •	Daily, Weekly and Monthly report တင်ပြရမည် •	Receivable and Payable စာရင်းတင်ပြရမည် •	သက်ဆိုင်ရာDept.များနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည် •	Stock Entry, Cash flow, Financial Statement များစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် •	Bank Transaction နားလည်ရမ� ...
Junior Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading ) Accountancy Jobs Accountancy Jobs Junior Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
MaGa Manufacturing Co.,Ltd
Students Guide Co.,Ltd
Yangon (Rangoon) 233 Days
Yangon (Rangoon) 344 Days
Yangon (Rangoon) 360 Days
Yangon (Rangoon) 378 Days
Yangon (Rangoon) 418 Days
Yangon (Rangoon) 494 Days